Ny fandroana sy ny fiasan'ny vatana dia naneho ny filaharany amin'ny Halloween - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny fandroana sy ny fiasan'ny vatana dia naneho ny filaharany amin'ny Halloween
Ny fandroana sy ny fiasan'ny vatana dia naneho ny filaharany amin'ny Halloween
by Trey Hilburn III Jolay 27, 2020
by Trey Hilburn III Jolay 27, 2020 844 hevitra
Vao tamin'ny herinandro lasa iny Target nanomboka nivarotra ny varotra Halloween azy ireo tao amin'ny tranonkalany. Ankehitriny Miasa ny fandroana sy ny vatana namoaka ny volon'izy ireo karazana zava-manitra manitra manitra.
Ny fanangonana ny fandroana sy ny vatana dia misy ny labozia, fanosotra ary fanadiovan-tanana. Fa misy kosa ny mahita fahafinaretana vitsivitsy toy ny jiro alina ary zavatra hafa. Sarotra ny milaza hoe inona no tena tiantsika satria variana loatra amin'ny labozia misy lohahevitra isika. Fa, ra vampira kosa toa milay be.
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, Target dia namoaka ny entan'ny Halloween. Ireo efa mivarotra. Tsy dia mampino raha mieritreritra ianao fa ny volana Oktobra dia mbola lavitra be. Azoko atao ny mankasitraka ny fitiavana ilay spookiness na izany aza. Betsaka ny entana ara-potoana no maharitra mandritra ny taona sisa tavela. Raha ny marina, rehefa tonga ny Krismasy dia matetika no hitako mampifangaro an'ireny haingon-trano ireny miaraka amin'ireo andalana Halloween. Ankehitriny miaraka amin'ity fanangonana Bath and Body Works ity, ny tranoko dia ho maimbo sy mandavantaona mandritra ny taona sisa.
Inona avy ireo entana tianao indrindra amin'ny fanangonana ny Bath and Body Works? Citrus Boo mamatonalina? Voatavo tonga lafatra? Mampatahotra ve? Ampahafantaro anay ny sombinao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra.